पत्रकारको सानी छोरी चिक्दा | Kamsastra
Sex, पत्रकारको सानी छोरी चिक्दा,
;तर म भने आफ्नै घरअको माल ले अन्त चिकाउदै हिंडेको कुराले अच्म्मित भको थिय र कसरी आफुले पनि चिक्ने भन्ने कुरा को प्लान बनाउन थालेको थिए तेस्म्याथएे पनि भर्खर कि १३ ब्-१४ बर्ष कि मस्त माल। त्यो सम्पूर्ण घटना ले गर्द नै मेरो मन म यस्तो भावना आएको थियो। दिन्हरु बित्त्दै गयो कुरा हरु सबै सामान्य नै भयो र मैले बिस्तारै आफ्नो चिकमरी गर्ने काम को प्लान अगाडि बढाउदै गए। म उनिहरुको रुम म गैरह्न्थे अनी नेट मा मोबाईल मा जिस्की रहन्थे। १ दिन मैले उनिहरुले नेट्मा के के हेर्दा रहेछन भनेर इन्त्टर्नेट को हिस्ट्री हेरेको त म तीन छक परे किनकी त्यहा त सबै पोर्नो साईट रहेछ। त्यस पछी मैले सुनिता लाई यक्लाई हुँदा जिस्काउन थालथे। म भन्थे य् सुनिता मलाई पनि तेरो मोबाईल बाट इङ्लिस फिल्म हालिदेन भन्थे तर यू छैन भन्थी अनी म भन्थे तलाई चाहिन्छ भने मेरोमा छ हालिदिउ? यू हुन्छ भन्थी। १ दिन साचिनै मजाक मजाक मा मैले ३-४ वटा बेस्ट क्वालितिको ब्लु फिल्म हलिदे। अनी दोस्रो दिन सोधे कस्तो लाग्यो? यू केही बोलिन। १ दिन मैले भने फेरी केटा साथीकोमा बर्थ डे मनाउन जानेकी? उस्ले भन्थी नाई। अनी मैले भने म सँग बर्थ डे मनाउने त? उु चुप चाप बस्थी। अनी मैले सम्झाये उस्लाई हेर सुनिता सानो मान्छे घर छोडेर कतै जान हुँदैन बरु तलाई के चाहिन्छ यहाँ नै म ब्याबस्था गरिदिन्छु। उस्ले हुन्छ भनी। उस्लाई मैले भने बरु म छु नि त किन अन्त जान्छेस उस्ले मुखै खोलेर भनी तपाईं त अंकल जस्तो मान्छे तपाईं भएर के हुन्छ र? मैले भने अंकल जस्तो भएर के भो त म साचिकै अंकल त होइन नि। अनी मैले उस्लाई सिकये मेरो कोठा मा पढ्ने बहाना बनाएर आउ अनी हामी दुबइ जन मस्त इङ्लिस फिल्मा हेरुला। अर्को दिन सचिनै यू मेरो कोठामा किताब बिकेर आइ । उस्को बाबालेनै पढ्न हो भने त जा भनेर पर्ठायका रहेछन। मेरो कोठा मा सुनिता पस्ने बित्तिकै मैले कोठाको चुक्कुल लगए। अनी कम्प्युटरमा नयाँ हाइ डेफिनेसन ब्लु फिल्म लगए।
Labels: Sex, पत्रकारको सानी छोरी चिक्दा